Sida loo Beddelaan MKV in DivX si fudud oo dhaqso
> Resource > Video > Sida loo Beddelaan MKV in DivX
Sababta ugu weyn ee dadka loogu badalo MKV in DivX waa inuu u ciyaaro uruuriyaa MKV ay qaar ka mid ah qalabka hardware certified® DivX. Dabcan, waxaa jiri kara sababo kale. Ahaatee, haddii aad sidoo kale baahida loo qabo, oo aan ka helay hab lagu kalsoonaan karo in sidaas la sameeyo, waxaad raaci karaan tilmaamaha hoos ku qoran. Halkan, waxaad yeelan doontaa si loogu badalo aad MKV in files DivX si deg deg ah, iyo sii video tayada asalka awoodaan.
Si aad u samayn, a video Converter smart sida Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ) waa lagama maarmaan. Tan iyo DivX run ahaantii ma aha codec a video qaab video ah, oo badan converters video suuqa ku aadan dadka isticmaala bixiyaan fursad u DivX. Laakiin Wondershare Video Converter gebi ahaanba kala duwan. Waxaa si toos ah u siinayaa ikhtiyaarka ah DivX, si aad si DivX videos badalo karaa videos arrin si fudud oo dhaqso. Markaas, faylasha la gediyay la ciyaaray sami karo qalab kasta oo software iyo hardware DivX taageerto. Fadlan akhri oo ku saabsan tilmaan-straighforward hoos ku qoran.
1 Import MKV files si MKV si Converter DivX
Ka dib markii aad furto barnaamijkan, waxaad u baahan tahay inaad soo dhoofsadaan files MKV ah si ay u qabtaan diinta video. Marka dhinaca kore ee bidix ee interface barnaamijkan, waxaa lagu Add Files button. Just u riix, ka dibna waxaad eegi kartaa in folder video on your computer ah. Dooro files MKV aad rabto in aad ka gal, oo waxay u soo dhoofsadaan.
Dooro qaab DivX sida qaab wax soo saarka ee liiska qaabka wax soo saarka barnaamijkan ee. Si aad u sameeyo, marka hore, waxaad u baahan tahay riix image qaab dhinaca midig ee interface ah, ama guji liiska hoos-hoos ku Qaabka Output guddi. Labaad, tag Qaabka> Video> DivX doorasho ee suuqa kala soo socda.
3 Beddelaan MKV in DivX
Bilow MKV inay diinta ka DivX ay si fudud garaacid ka badalo badhanka ku yaal geeska hoose ee midigta ah interface ka. Isla markiiba, waxaad arki doontaa interface ka muujiyay sida soo socota. Bar cagaarka ka dhigan tahay horumar diinta video. Sidaas si cad u garan kartaa inta ay diinta ka socon doono. Laakiin ha ka welwelin. Habka Wareejinta waxaa la dhakhsaha badan dhamaystiri doono, si ay xawaaraha diinta ultrafast mahad.
Fiiro gaar ah: Marka aad furto folder wax soo saarka, waxaad ka heli doontaa faylasha la gediyay waa files la magac file .avi kordhin. DivX waa codec video ah, laakiin qaab video ah, waxaa dhab files AVI ah encoded la DivX.
Sida loo geliyaan Custom Videos canabka